चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’मा तिन वयस्क युवकको कथा (भिडियो) | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More...
Home >> Features >> चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’मा तिन वयस्क युवकको कथा (भिडियो)
भोलि शुक्रबार बाट प्रदर्शनमा आउदै छ सेक्स कमेडी चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’।बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मिस्टर भर्जिनको बारेमा केहि जानकारी दिएको छ।
नेपाली समाज यौनको विषयमा खुलेर बोल्न चहादैन । यौनको कुरा गर्दा मुख छोप्नेको सङख्या धेरै छ । अझ नेपाली चलचित्र इतिहासलाई हेर्ने हो भने यौन मनोविज्ञानको विषयमा निर्माण भएको चलचित्र निकै कम छ । । तर प्रदर्शनको मितिसम्म आइपुग्दा चलचित्रको प्रमोसन सामाग्री (ट्रेलर, गीतहरू)हरूले पाएको प्रतिक्रियाले निर्माण पक्ष ढुक्क रहेको निर्देशक बिशारद बस्नेत बताउँछन् ।
चलचित्रको कथाको बारेमा बोल्दै उनी भन्छन् ‘मिस्टर भर्जिनले तिन वयस्क युवकको कथा बोल्छ । यौन मनोविज्ञानमा आधारित यो चलचित्रका तीन पात्र हाम्रा समाजको पात्र हो । समाजका कथासँगै हाम्रो युवा अवस्थाको कुरा, हामी भन्दा ठुला र हामी भन्दा सानाका कुराहरूलाई समेटिएको छ । जुन कुरालाई हाम्रो जीवनमा पनि रिलेट गर्छ । मानिसले बिताएको हरेक पलहरू, जब उसको उमेर पुग्छ र उमेरको हिसाबले हरेक कुरामा परिवर्तनमा आउँछ । उसले यौनको बिषयालई कसरी सोच्छ ? आफ्नो यौन चाहनालाई परिपूर्ति गर्नेलाई ती समाजका तीन पात्रले कस्तो प्रकारको अवरोधहरूको सामना गर्नु पर्छ ? चलचित्रले यही कुरालाई बोल्छ । ’
त्यस्तै चलचित्रको बारेमा बोल्दै कलाकार कमलमणि नेपाल भन्छन् ‘ हाम्रो नेपाली समाजमा अझै पनि यौनको विषयमा बोल्न अकमकाउछौ । एउटा उमेर पुगेको छोरोलाई आफ्नो परिवारसँग खुलेर मलाई बिहे गरिदेउ भन्न सक्दैन । सोही कारण उनले आफ्नो मनमा यौनको कुष्ठाहरु सङ्कलन गरेर राखिरहेको हुन्छ ।
चलचित्रको कथावस्तु र टिमको कारण मिस्टर भर्जिनमा जोडिएकी नायिका मरिष्का पोखरेललाई पत्रकारले चलचित्र खेल्दा कहिले पश्चात्ताप भयो भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफ दिन्छिन् ‘ रिलिज नजिक आउँदा उत्साहित भइरहेको छु । मेरो डेव्यु चलचित्र जस्तै लागिरहेको छ । मलाई चलचित्रको नामले कहिले पनि फरक पारेन ।
यो चलचित्रमा प्यासी मोहनको भूमिकामा कलाकार रविन्द्र झा प्रस्तुत भएका छन् । चलचित्र गरिरहन्दा दुखसँगै रमाइलो अनुभव भएको रविन्द्र सुनाउन्दा । त्यस्तै नायक गौरव पहारी चलचित्रलाई लिएर निकै आशावादी रहेको बताउँछन् ।
वल्र्ड वाइड फिल्मस् डिस्ट्रिब्यूसनको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रलाई विशारद बस्नेतले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा गौरव पहारी, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, मरिश्का पोख्रेल, भोलाराज सापकोटा, रविन्द्र झा, सिर्जना सुब्बा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
‘मिस्टर भर्जिन’मा खिलेन्द्र तिमल्सिना, प्रजापति सिवाकोटी, मुकेश रेग्मी र बिशारद बस्नेतको लगानी रहेको छ भने सह निर्मातामा सन्दिप उप्रेती, टिका पुलामी मगर र हेम प्रसाद दवाडी रहेका छन् । चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’ भोली भाद्र १ गतेबाट प्रर्दशनमा आउँदैछ ।
Previous: नायक प्रदीप खड्का अभिनित चलचित्र ‘रोजी’को नाम परिवर्तन
Next: फ्राइडे रिलिजमा ‘मिस्टर भर्जिन’,‘ब्ल्याक’ र ‘जय शम्भु’ भिड्दै
सी.आइ.डी. का दया ‘सिंघम २’ मा देखिदै ।